Moscow Red Square mechiri mgbe mgbidi Kremlin dara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Moscow Red Square mechiri mgbe mgbidi Kremlin dara
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Moscow Red Square mechiri mgbe mgbidi Kremlin dara.
Oké ifufe na -efegharị na Moscow, na -akpata ọgba aghara n'okporo ụzọ na ọbụna na -akụda ihe nrụrụ aka, na -emebi mgbidi Kremlin mara mma.
Onye isi ala Russia Vladimir Putin ekwuola na ọnọdụ ihu igwe na -adịghị mma, dịka oke ọkụ na oke ide mmiri, na okpomoku zuru ụwa ọnụ.
Na nkwupụta ezigara na ọnụ ụzọ mgbasa ozi ime obodo Moscow, ndị isi dọrọ ndị bi na mpaghara aka na ntị ka ha lezie anya, na -ekwu na ifufe nwere ike iru kilomita 20 kwa elekere.
Otu akụkụ dị na mgbidi Kremlin na -efu efu kpamkpam mgbe ikuku ifufe fechara.
Oké ifufe, mmiri ozuzo na akụ mmiri ozuzo bibiri isi obodo Russia nke Moscow taa.
Oké ifufe na -ebugharị ihe kpatara ogbugbu mmadụ zuru ebe niile, ịkụ aka n'elu osisi, na -eziga ite ahịhịa na -efegharị n'okporo ụzọ na ọbụna mebie mgbidi nke MoscowEbe e wusiri ike nke Kremlin.
Moscow ndị ọrụ obodo tinyere nkwupụta na ọnụ ụzọ akụkọ akụkọ ọchịchị obodo, na -adọ ndị bi na ya aka na ntị ka ha kpachara anya, n'ihi oke ikuku nke nwere ike iru kilomita 20 kwa elekere.
“Biko nọrọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume n'oge ihu igwe na -adịghị mma,” ka akwụkwọ akụkọ ahụ kwuru, “kpachara anya nke ọma n'okporo ụzọ, zere ịgbaba n'akụkụ osisi ma ghara ịdọba ụgbọala n'akụkụ ha.”
Akwụkwọ akụkọ niile MoscowA machibidoro ihe ngosi Red Square nke ọma n'okporo ụzọ dị nso mgbe ihe nrụda ahụ dapụrụ site na Kremlin mgbidi tupu taa.
Dị ka ndị ọrụ mberede si kwuo, ihe nrụpụta na Kremlin mgbidi dara, mebie otu n'ime mgbidi mgbidi ya.
Tupu mgbe ahụ, Ụlọ Ọrụ Na -ahụ Maka Nchebe Federal nke Russia kwupụtara na ihe merenụ mere n'ihi oke ifufe, enweghị mmerụ ahụ ọ bụla.
Dị ka Putin si kwuo, ọnụ ọgụgụ na -arị elu nke ihe omume ihu igwe dị oke egwu bụ "ma ọ bụrụ na ọ bụghị kpamkpam, mgbe ahụ opekata mpe, n'ihi mgbanwe ihu igwe zuru ụwa ọnụ na mba anyị."